April 2017 - Page 5 of 12 - Puntland Mirror Believable Media Website
Madaxweynaha Puntland: Turkigu wax shaqo ah oo muuqata kama qabtaan gudaha Puntland
April 17, 2017 Shafei Osman Yusuf 0
Garowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in Turkigu uusan wax shaqo ah oo la tabaan karo ka qaban gobolada Puntland tan iyo markii uu yimid Soomaaliya sanadkii 2011-kii. “Turkigu in badan […]
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan oo madaafiic ka dhex ridayay gudaha Muqdisho
April 16, 2017 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan kuwaasoo madaafiic ka dhex ridayay caasimada Muqdisho, sida uu sheegay masuul dowladda ah. Wasiirka Amniga Qaranka ee dowladda Soomaaliya, […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali government forces on Sunday killed two Al-Shabab fighters who shelling artilleries in the capital Mogadishu, an official said. Somalia’s Minister of Internal Security, Mohamed Abukar Islow told reporters that the forces have killed […]
Labo kamid ah burcadbadeeda Soomaaliya oo meydkooda laga helay gobolka Sanaag
April 16, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Meydka labo qof oo dhintay ayaa laga helay tuulo xeebeedka Daruuro ee gobolka Sanaag, sida dadka deegaanka jooga ay khadka taleefoonka ugu sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Labada meyd ayaa waxaa meel u dhow […]
Two Somali pirates found dead in Sanaag region
Garowe-(Puntland Mirror) Two dead bodies were found in Daruro coastal village of Sanaag region, residents in the area told Puntland Mirror by phone. The two dead bodies were left by the Somali pirates near the […]
Dagaalyahano ISIS katirsan oo weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaalyahano ISIS katirsan ayaa weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari, sida sarkaal dowladda ah uu warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay. Sarkaal dowladda Puntland katirsan oo codsaday in aan magaciisa la sheegin, ayaa Puntland Mirror […]
Garowe-(Puntland Mirror) ISIS fighters have attacked a Dasaan village near Qandala coastal town of Bari region, an official confirmed to Puntland Mirror. A Puntland security official, who asked not to be named, told to Puntland Mirror […]
April 15, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya hoggaamiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Raysulwasaare Xasan […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) The meeting between the leaders of Somalia’s federal government and regional states kicked off on Saturday in the Somali capital, Mogadishu. The meeting is attended by President Mohamed Abdullahi Farmajo, Prime Minister Hassan […]
Diyaarado dagaal oo looga shaki qabo in ay Kenya leedahay oo duqeeyay xero milatari oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Gedo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo looga shaki qabo in ay Kenya leedahay ayaa habeenimadii xalay oo Sabti ahayd duqeeyay xero milatari oo ay Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Ceel Cade ee gobolka Gedo, sida ay sheegeen […]
The U.S.’s killing of the deputy leader of an Islamic State faction in Somalia’s Puntland will blunt the group’s ability to carry out further attacks in the semi-autonomous region that sits near a key shipping [...]
Baaralamaanka Puntland oo ansixiyay heshiiska DP World
Garoowe-(Puntland Mirror) Baaralamaanka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah ansixiyay heshiiska DP World, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. 46 xildhibaan ayaa u codeeyay heshiiska, ma aysan jirin cid diiday, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali [...]